အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုစနစ်အား ဖော်ဆောင်မည်MyanTrade
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုစနစ်အား ဖော်ဆောင်မည်
ဒီဂျစ်တယ်စင်္ကြန်အသုံးပြုလျက် တစ်ခုတည်းသော ပြတင်းပေါက်စနစ် (single-window clearance) ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းဆောင် ရွက်မည့် အစီအမံအား အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရက လွှတ်တော်သို့ အဆိုပြုတင်ပြထားရာ ၎င်းအစီအစဉ်မစတင်မီ၌ပင် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်လိုသူများ၏ စိတ်ဝင် စားမှုကို ရရှိလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အမည်ဖော်ပြလိုခြင်းမရှိသော အစိုးရအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီး ၆ ခုသည် အဆိုပါအစီအစဉ်အရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် အစိုးရနှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အန္တရာပရာဒေ့ရှ်နှင့် ဩရိသျှပြည်နယ်တို့၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဆောင်ရွက်နိုင်သော မြေနေရာရရှိ နိုင်မည့်အခြေအနေကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများရှိကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဗဟိုအစိုးရသည် ပြည်နယ် ဒေသန္တရအစိုးရများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပြည်နယ် ၈ ခုက မြေနေရာအချက်အလက်ဘဏ် (land bank) ၌ ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် သဘောတူညီထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြားပြည်နယ် ၆ ခုသည်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် မြေနေရာအချက်အလက်များကို land bank သို့ ပေးပို့ရန်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပြည်နယ်ပေါင်း ၂၀ ထံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်နိုင်မည့် မြေနေရာနှင့် အချက်အလက်များကို စုစည်းရရှိနိုင်ရန် ခန့်မှန်းထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုစနစ်အား မတ်လကုန် သို့မဟုတ် ဧပြီလ ပထမရက်သတ္တပတ်၌ စတင်နိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဖြင့် အိန္ဒိယ Business Standard သတင်းဌာနမှ ဖော်ပြပါသည်။
အိန္ဒိယ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး Mr. Piyush Goyal က စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့၌ လော့ဆာဘလွှတ်တော်သို့ စာဖြင့်တင်ပြရာတွင် ဗဟိုအစိုးရ လက်အောက်ရှိ ဌာနများနှင့် ပြည်နယ်များ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်သည့် စင်္ကြန်များ အများပြားရှိ နေပြီး လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်လိုသူများအနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားသည့် အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံထံမှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရယူ မှုများကို ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ မြေနေရာရရှိနိုင်မှုအပါအဝင် အခြားသော သတင်းအချက်အလက်များကို စုစည်းပံ့ပိုးလျက် လုပ်ငန်းစဉ်အရပ်ရပ်ကို တစ်နေရာတည်း၌ ကိုင်တွယ်ရှင်းလင်း ပေးနိုင်မည့် ဗဟိုအဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုကို one-stop digital platform တစ်ခု လွှင့်တင်မှုနှင့်အတူ ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာနများမှ လက်ရှိလွှင့်တင်ထားသည့် အင်တာနက်စင်္ကြန်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပဲ အဆိုပါ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပြည်နယ်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်သည့် စနစ် များကို ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ‌ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့် တင်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဦးစီးဌာနသည် ၎င်း၏ စက်မှုလုပ်ငန်း သတင်းအချက်အလက်စနစ် (Industrial Information System - IIS) အင်တာနက်စင်္ကြန်တွင် ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ လေဆိပ်နှင့် ဆိပ်ကမ်းတို့ကဲ့သို့သော အခြေခံအဆောက်အအုံများအပါအဝင် စက်မှုဇုန်များဖော်ထုတ်လျက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မြေလွတ် မြေရိုင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေ၊ သတ္တုတွင်းမြေ၊ သစ်တောမြေ စသည့်အချက်အလက်များကို ဂြိုဟ်တုမှ ရိုက်ယူထားသည့် မြေပြင်ပုံရိပ်များနှင့်တကွ စုစည်းပံ့ပိုးပေးမည့် မြေနေရာဘဏ် (National GIS-enabled Land Bank) ကို ၂၇-၈-၂၀၂၀ နေ့၌ စတင်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သံမဏိပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အခြားစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော အကြီးစားအဆင့် အခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုကဲ့သို့ မြေနေရာရရှိရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်စင်္ကြန်အား ထူထောင်ခြင်းမှာ သင့်လျော်ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ပြည်နယ်များ၌ ကွဲပြားခြားနားသည့် မြေအသုံးချမှု သဘောသဘာဝနှင့် မြေနေရာရယူမှုဆိုင်ရာစနစ်များ အရ မြေရာနှင့်ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် သတိပြုဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့် မြေနေရာ အတွက် မြေအသုံးချပိုင်ခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် အခြားဆက်စပ်သည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များရှိ မှတ်ပုံတင်မှု နှင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုတို့ကိုလည်း လွယ်ကူစေရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက ထောက်ပြပြောဆိုလျက် ရှိပါသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် အိန္ဒိယ၌ထုတ်လုပ်ခြင်း အစီအစဉ်အမှတ် (၂) (Make in India 2.0) အောက်တွင် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ၂၇ ရပ်၌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လွယ်ကူရေး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ ပထမတန်းစား ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ထောင်ရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှု လွယ်ကူချောမွေ့ရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို မြှင့်တင်ရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဦးစီးဌာနသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍ ၁၅ ခုကိုလည်းကောင်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ ၁၂ ခုကိုလည်းကောင်း တာဝန်ယူ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ‌ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source: 1. Single-window clearance to start in April, 19 Oct 2020, Business Standard
2. With Single Window Clearance and Land Banks, India Lays out the Red Carpet for Investors, 19 Oct 2020, www.thetruepicture.org
3. Single Window System, Ministry of Commerce & Industry, 16 Sept 2020, Press Information Bureau of India
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတို့မှ စီးပွားရေးသံမှူးများအား တွေ့ဆုံမှာကြားခြင...
ပြည်တွင်းဈေးကွက် လိုအပ်ချက်အား ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အိန္ဒိယအစိုးရက ကြက်သွန်နီတ...